एक्लो ऊ | मझेरी डट कम
कत्ति दिन भयो उसले एक्लै विताएको । हो ऊ विद्रोही भयो । त्यसैले पनि होला मानिसहरु डराउँथे ऊसँग । तर ऊभित्र यत्ति कमजोरी थियो कि उसँग सङ्गत गर्नेहरु हरेकले ऊसँग केही न केही ठगिनै रहे । प्रतिकार गर्यो त सामाजिक रीतिरिवाज विरोधी भयो । धर्म विरोधी भयो । जो पनि भन्थ्यो यो सिधासिधा कुरा गर्छ त्यसैले यसले दुःख पाउँछ । यो कलियुग हो कलियुग, साँचो र सत्यको कहिल्यै बोलवाला हुँदैन । जो पनि उसलाई यही सम्झाई पञ्छेर जान्थ्यो । हो उसको बाटो सर्वभलाइको थियो तर कहिल्यै उसलाई सर्वसुलभ भएन । त्यसैले उसले कोहीसँग पनि भेट्न चाहेन । पिल्सिनुभन्दा एक्लो जीवन अडिक साथ रोज्यो उसले । जब देशमा परिवर्तन हुन्छ त्यसपछि भेट्ने उसको प्रण थियो ।
साथी उसको थिएन । ऊ पहिले त सबैको भलो चाहन्थ्यो तर भलो गरेर पनि आफुभन्दा माथिकाले उसलाई माथि जान दिएन । त्यसैले एक किसिमको नफरत भयो उसको उच्च वर्गहरुप्रति । उसले भनिरहन्थ्यो “धन भएकोको मन हुँदैन मन भएकासँग धन पर्याप्त छैन । हो ऊ यस्तै मनकारी हो र यस्तैलाई आफ्नो अभिन्न ठान्छ । धन भएकोलाई कसरी धन बढाउने भन्ने मात्रै चिन्ता हुन्छ, कसैलाई दुःख होला यसको चिन्ता कहिल्यै हुँदैन । त्यसैले उनीहरु जसरी पनि जे गरेर पनि अरुलाई कुल्चेर, पिल्सेर सिँढी बनाएर , अरुको मर्का नबुझी माथिसम्म पुग्न हरदम लागिरहन्छन् ।”
उसले आफुभन्दा तलकालाई खुब ढाडस दिन्थ्यो । सहयोग गथ्र्यो तर उनीहरु पनि ऊसँग डराउँथे । किनकी उनीहरुलाई ऊ यसरी असल बन्दा उसले पाएका दुःखहरुका बारेमा थाहा हुन्थ्यो । ऊसँग मिलेमा, साथ भएमा, उनीहरुले झन् दुःख पाउँथे भन्ने उनीहरुको सोझो तरिकाको बुझाइ थियो । यस्तोमा उसले आफुभन्दा तल्ला वर्गका आफुबाट विच्किए पनि सहयोग गर्न पाएकोमा अहोभाग्य सम्झिन्थ्यो । तल्लो वर्गलाई उसले जतिसुकै नराम्रो व्यवहार गरे पनि उसले त्यसलाई स्वीकाथ्र्यो । वैमनस्यता, रिस गरेन । किनकी उनीहरुले नबुझेर पढाइमा कमजोर भएर, वौद्धिक ज्ञानको कमी भएर त्यसो नगरेको हो भन्ने उसले बुझेको थियो । तर उच्च वर्गले जब बुझेरै पनि समाजका लागि एक सिन्को भाँच्दैनन् अनि उसको रिसको पारो तात्थ्यो , किनकी उनीहरुलाई सहयोग सजिलो काम भएर पनि उनीहरुले सहयोग गरेनन् । आफुभन्दा तल भएकालाई अपनत्व व्यवहार गरेनन् । उसको भनाइ थियो कि यिनीहरुले बुझेर बुझ पचाएको हो । उसले अर्थ गथ्र्यो “सुत्या जस्तो गर्नेलाई कहिल्यै उठाउन सकिन्न बरु सुतेकालाई ज्ञानको आधारमा उठाउन सकिन्छ । बुझेर बुझ पचाउनेलाई गाह्रो हुन्छ । नबुझ्नेलाई ज्ञान बाँडेर असल बनाउन सकिन्छ त्यसका लागि सरल माध्यमले !” हो यसरी धनी र गरीबको उसले भेद छर्लङ्गै देख्थ्यो । यस्तोमा ऊ सधैँ गरीब निमुखाका पक्षमा डटेर उभिएर खडा हुन्थ्यो । त्यसैले साथी उसको थिएन भनेर पनि धेरै साथी जहाँ जाँदा पनि अप्रत्यक्षी सहयोगी भइरहेका हुन्थे । त्यसैले ऊ सधैँ सार्वजनिक व्यक्तित्व भइसक्यो । उसले भन्ने गथ्र्यो “भौतिक रुपमा सामिप्यता पाएन र त के भो शोषितहरु भित्रभित्रै खरानीभित्र आगोका दन्काइमा रहेको उसले देख्दछ । “त्यो ज्वालामुखी कुन बेला फिलिङ्गो हुने हो ? कुन बेला विष्फोट भइ दन्किने हो ? जब दन्किन्छ नि सबै उसको भौतिकरुपमै साथ हुन्छन् ।” यसैलाई उसले परिवर्तनको उथलपुथल अनि जनताको आवाजको बुलन्दीपन आवश्यक देखाउँदै जान्थ्यो ।
देशमा ऊजस्ताको कलमको फिलिङ्कोले अन्धकार मेट्न थाल्यो । जनताहरु जुर्मुराउन थाले । त्यसपछि भने अलिअलि मानिसहरु राम्रो भएको उसलाई भान भयो । त्यसैले उसलाई भेट्न आउने मानिसप्रति अलिअलि सकारात्मक हुन उसलाई उत्साह जाग्यो । तरै पनि ऊ भने आतङ्कवादलाई बढावा दिई उक्साएको आरोपमा वषौं थुनुवा भइरह्यो ।
त्यो दिन उसको लागि विशेष दिन थियो । उसलाई भेट्न मानिसहरु आइरहेका थिए । धेरै दिन भयो उसले एक्लै विताएको । ऊ सँगै पहरा दिने मानिसहरुले उसलाई भीड भित्रको एक्लो मान्छे बनाए । यस्तो कैद खानामा बसेर उसले थुप्रै लेख रचनाहरु जन्माइसकेको थियो । उसका लागि त्यही लेख रचनाहरु सन्तानसरह जन्म भएका थिए । हुनत उसले धेरै लेखहरु जन्माएर पनि तिनीहरु टुहुरा भए । किनकी उसले लेखेको भाषा ठीक छैन, अशुद्ध छ भनेर उनिहरुले सावित गरे अनि वषौं लगाएर आफ्नो आत्मीय मित्र बनाएर दैनिक लेख्दै गएका कुराहरु गायब पारिए । उसलाई विह्वल बनाए, विचल्ली बनाए ।
भनिन्छ नि मनको कुरा खोल्यो भने सुख हुन्छ । तर उसलाई ठीक उल्टो भयो । उसले दुःख पोख्दा त्यही कमजोरीमा टेकी आलो घाउ कोट्याउनेहरु धेरै निस्के । उसलाई पनि त्यही भावहरु पोख्नु उल्टै आफैलाई झटारो भयो । उसका भावहरु विथोलिए । ऊ कत्ति रोयो । सधैं उसको दिमाग रन्थनिन्थ्यो । त्यसको लेखाजोखा कतैबाट भएन । तर त्यही दुःखमा झन् न्ुनचुक छरी रमाइरहे उनीहरु । त्यसैले भेट्न आएकाहरुलाई के भेट्न आएको भन्नु ? उसको पक्षपोषण हुँदै भएन । त्यसैले उसले अप्रत्यक्ष रुपमा साहित्यबाट झटारो हानी लेख्न थाल्यो । ऊ के मात्र भएन कथाकार, लघुकथाकार, निबन्धकार, नियात्राकार, जीवनीकार, व्यङ्ग्ग्यकार, भूमिका लेखक, कवि, गीतकार आदि साहित्यका हरेक विधामा ऊ छाउन थाल्यो ।
यससँग जुझ्न उसले बोलेमा झन् ठुलो यातना झेल्नुपथ्र्यो । त्यसैले प्रतिकार स्वरुप लेख्दै गयो । लेख्नु उसको मौन रोगका अचुक रामवाण भयो । लेख्दैलेख्दै गयो , अक्षरको बीउ रोप्यो, अक्षरको फसल उब्जायो, एउटा कलमी खेती गर्दै गयो । आफुलाई लेखेपछि मात्र हल्का हुने लत बसाल्दै जिन्दगीका यात्राहरु डोर्याउँदै गयो ।
लेख्दैलेख्दै आफुले निखारिएका सिप, कला, झन्झन् तिखारिँदै लग्यो । दिनहरु वितेसँगै उसले शब्दकोषजस्तै शुद्ध लेखन गर्नसक्ने भयो । शिल्प, कालिगढ दक्ष हुँदै गयो । विम्ब, प्रतिक, उखान, उदाहरण दिई स्पष्टताले झटारो हान्नसक्ने खुबी भएकाले गर्दा एक वाक्य लेख्दा हजार वाक्य सोच्न पाठकहरु बाध्य भए । उसका लेखहरुले पाठकहरु बढ्दै गयो । हो ऊसँग डिग्री थिएन तर पिएचडी गर्नेहरुलाई उसैले सघाएर सफल बनाइरहेको थियो । त्यसैले उसलाई यस्तोमा एक किसिमको आनन्द आउँथ्यो । मिठासपन छाउँथ्यो । जिन्दगीको ठुलो सुख त्यही आनन्दीपन थियो उसको । ऊसँगैका सहोदरहरु पिएचडीवालाहरु भन्दा उसले धेरै कुराहरु जानिसकेको थियो । अध्ययनलाई उसले रोकेन । उसका पियचडीवाला समउमेरका विद्यालयका सहपाठी साथीहरु राजनीतिप्रति आक्रोश पोख्दापोख्दै पढाइ सबै धुलोमा उडाइरहे । ऊ भने राजनीतिभन्दा एककदम अगाडि बढी राजनीति सुधार्ने जङ्ग कलमले लडिरहे । मानौं उसमा म्याक्सिम गोर्कीको आत्मा सवार भएको थियो । भाव पोखेपछि त स्पष्ट, अडिगसँग, सिलसिलेबाररुपमा सुख्खा ठाउँमा खहरे हुनसक्थ्यो ऊ ।
उसले लेखनमा लागेकाहरुलाई आफुसँग नितान्त नजिकको मान्थ्यो । आफुले लेखनमा पाएको अनुभवबाट लाभ प्राप्त गराउन उसले हरेकलाई सम्झाइरहन्थ्यो कि पहिले तपाईंले लेख्दा हास्यास्पद अवश्य होला तर निरन्तरको प्रयासले त्यो एकदिन बुलन्द तथा प्रभावकारी अवश्य नै हुनेछ । तर उसका मित्रहरुले माने पो ? उसको इच्छा थियो उजस्तै भएर सबैले उसँग हातेमालो गरोस् र समाज सुध्रोस् ।
उसलाई पिरोलिरहन्थ्यो , देश किन बर्बाद छ ? किन दुःखीहरु बढिरहेका छन् ? तर यसको उत्तर खोज्दा यस्ता राजनीतिक कुरा नगर् भनेर जो पनि उसलाई हकाथ्र्यो । उसलाई लाग्थ्यो कि यदि राजनीतिमा इमान्दारहरु लागेमा मात्रै देश विकास हुनसक्छ । तर उसको विचार कसैले सुनिदिए पो । उसले भनिरहन्थ्यो कि “यदि हामीले राजनीतिमा निगरानी राखेनौँ भने त्यो राजनीति उनीहरुका लागि लुटको धन खेलाउने भाँडो हुनेछ । देश बर्बादीतिर जानेछ ।” त्यसैले उसले सर्वसाधारण आम नागरिकहरुलाई जसरी पनि राजनीतिमा निगरानी राख्न सिकाउने सधैँ अडान लिन्थ्यो । त्यसकोे सहारा उसले लेखनलाई बनाएको थियो ।
“संसारमा प्रायः यस्ता घटनाहरु घटिरहन्छन् । त्यो के भने एक जना चालिस वर्षे व्यक्तिले आफुले १५ वर्षमा एसएलसी परिक्षामा अव्वल भइसकेर पनि पढाइ छोडेका कारण हाम्री श्रीदेबी नायिका करिश्मा दिदीले जस्तै आठ कक्षादेखि पढ्दै एसएलसी पास गरेपछि मात्र उसले सञ्चार माध्यममा आउन सहज भयो । सरकारी डिग्रीवालाहरु आज यस्तै छन् ।” यसो भनेर त्यसैले उसले निरन्तर अध्ययन, नयाँ समाचार तथा प्रविधिहरुप्रति सदैब अद्यावधिक हुन हरेकलाई सिकाइरहन्थ्यो ।
यही नियममा निरन्तर रहेका हुनाले विद्यालय पढ्न नसकेर छोडेको भएर के भो र ! उसको विनाप्रमाणपत्र पनि पढाई अब्बल भयो । उसले कुनै पनि सरकारी सँस्थाको सहयोगविना धेरै किसिमका ज्ञानहरु हासिल गर्दै गयो । पछि विस्तारैविस्तारै उसैले बुझ्दै गयो । बेलाबेलामा विद्यालय नै नगइकन प्राध्यापक बनेका कृष्ण प्रसाद पराजुलीसँग उसले आफुलाई दाँजेर नोस्टाल्जिक हुन्थ्यो । एक समय थियो ऊ थुनुवा भएर बस्दा त्यो ३ वर्षसम्म दैनिक निरन्तर रुपमा लेख्दै गएका लेखहरु उनीहरुले साजिस गरेर नराम्रो, अशुद्ध भनेका थिए । च्यातेर उसकै अगाडि उसका एक बाकस लेखहरु जबर्जस्ती आगोमा फ्याँकेर डढाइदिएका थिए । यसको नराम्रो दुःःखको सोच उसलाई एक वर्षसम्म आयो, सधैँ तीनवर्षको मेहनत भनी भयो वा कत्ति धेरै पुस्तकको दस्तावेज खत्तम भनी रुन्थ्यो । किनकी ऊ नजरबन्दमा थियो । अहिले जसरी प्रेस स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रतामा मानिसहरु बोल्दथे त्यसरी ऊ पहिले नै बोल्दथ्यो, त्यसरी नै लेख्दथ्यो । भलै ऊसँग त्यसको प्रमाण सुरक्षित थिएन तर त्यही लेखनको लतले उसको लेखहरुमा निखारपन ल्याएको थियो । त्यसैले त्यही लेखन पढ्नेहरुका नजरमा ऊ आतङ्ककारी भएको थियो । त्यसपछि उसले त्योभन्दा १०वर्ष निरन्तर लेखिसकेको थियो । त्यसैले अब उसलाई त्यो पुरानो चोटले पिरोलिन सकेन ।
यसरीे ऊ सफल तथा जुझारु लेखक भइसकेको थियो । ऊ लेख्नलाई सामग्रीहरु खोजतलास, खोतलखातल गर्दागर्दै धेरै क्षेत्रहरुमा निरन्तर जानिफकार हुँदै गइरहेको थियो । ऊ जस्ताको अथक, अविचलित तथा सङ्घर्षमय बलिदानले समाजका लागि ठुलो योगदानले गर्दा देशमा परिवर्तनको फड्कोको यात्रामा आयो । तर पनि आम नागरिकहरुलाई पहिलेको हावाले छोडेको थिएन । मानिसहरुलाई ऊजस्ताले लेखेका प्रकाशित लेखहरु, साहित्यहरु पढ्ने त कुरै छोडौं पढ्न दिँदा पनि वेवास्ता गर्थे ।
“उनीहरुको पहिले दमनकारी शाहीसेनाले यो मात्र पढ् भनेर प्रकाशित हुने जुन पत्रिका हो सो पत्रिकामा प्रकाशित भएपछि मात्र त्यो लेख मैले पढ्नुस् भन्नु पर्ने रे । अनि उनीहरु पढ्छन् ।” यही उसको गुनासो हुन्थ्यो । समाज कसरी परिवर्तन गर्ने ऊ अझै फेरि रणभुल्ल भयो । हरेक दशदश वर्षमा उठ्ने जनताहरु फेरि सुत्न थाले ।
ऊ बस्ने ठाउँमा कोही आयो तर उसलाई भेट्न आएको भान भएन । किनकी उनीहरुलाई ऊ अछुत जस्तो भयो । किनकी ऊ यत्तिबेलासम्म जातपातको सिमा नाघेर तल्लोवर्गलाई पनि समभावमा एकाकार गर्दै लम्किरहेको थियो । यसले उसलाई एक किसिमको आनन्दपन, राहत महसुस भइरहेको थियो । त्यसैले उनीहरुलाई पचेको थिएन । पहिले जस्तो उसका भावहरु रछानमा फाल्ने हिम्मत त भएन उनीहरुलाई । तर उनीहरु गेस्चर मात्र गर्न आएका थिए । योबाहेक उनीहरु केही गर्न सक्ने क्षमताका पनि थिएनन् ।
गेस्चर उनीहरुको एक किसिमको रोग थियोे । उनीहरुको वाक्य फुटेमा उनीहरु तल झर्ने उनीहरुको मनसाय थियोे । किनकी उनीहरु ऊसँग वौद्धिकतामा जित्न सक्दैनथे । हामीले हेर्दा त्यो उनीहरुकोे रोग थियोे तर त्यही कुरा उनीहरुका लागि धार्मिक इशाराको देवपूजन कार्य थियो । त्यो नमान्नेहरुलाई उनीहरु नास्तिक, अधर्मी ठान्थे , सावित गर्थे । मानसिक यातना दिन्थे ।
ऊ जान्थ्यो रगतले लतपतिएको ठाउँहरुमा । ऊ जान्थ्यो धेरै दुःख पाएका सुकुम्बासी बस्तीहरुमा । ऊ जान्थ्यो अहिले पनि छर्रा शरीरभरि पारेर जिउँदा शहीद भएकाहरु कहाँ । जुन ठाउँमा जान अहिले पनि उसका आसेपासेहरुलाई तथा सरकारी निकायहरुलाई दिगमिग हुन्छ । उसका आसेपासेहरु पनि लेख रचनाहरु त लेख्थे तर उनीहरुको कुरा बुझ्न उसलाई शव्दकोष पल्टाउनु पर्ने हुन्थ्यो । फगत त्यसमा केही हुँदैनथ्यो सधैँजसो वर्तमान राजनीति प्रति चम्चागिरी हुन्थ्यो । सञ्चारमाध्यमका रेडियो, पत्रिका तथा टेलिभिजन सब तँछाडमँछाडसँग सेवक बन्न तल्लिन हुन्थ्यो । यसका विपरीत ऊ लेख्थ्यो त दुःखीयारीहरुका लागि । उसले एकपटक उसका यस्ता आसेपासेहरुलाई सोधेको थियो । सरफरोस भनेको के हो ? भनेर । तर उनीहरुले कसैले पनि बताएनन् । एक पटक पढ् बाबु भनेर उनीहरुले एउटा हिन्दी शब्दकोष दिए उसलाई तर त्यसमा उसले सरफरोसको क पनि भेट्टाएन । ऊ घुम्ने बस्तीबस्तीमा, चप्पाचप्पामा प्रत्येक बच्चाबच्चाहरुलाईसमेत थाहा थियो कि सरफरोस उनीहरुको मुटुमा छ भनेर ।
फेरि पनि उनीहरु यत्ति दमनकारी थिए कि बयान गरी साध्य थिएन । आफुले चालपाएदेखि उसले श्रम गरीगरी जीवन निर्वाह गर्यो । सरकारी काममा उसलाई कहिल्यै सामेल गराएनन् । त्यसैले उसले थुनुवा अवधिमा भित्रभित्रै प्राइभेट कार्यालयहरुमा श्रम गरीगरी आफ्नो गुजारा गरिरहेको थियो । उनीहरुलाई उसले काम गरेको ठाउँमा यत्ति वर्षको मेहनताना लिन पाएन भनेपछि, उसकोे खानाको भाग सुदामा र कृष्णको कनिका भनी खोसेर खान्थे र आफुहरु महल ठड्याउँथे । विचरा उसलाई काम दिलाउनेहरुले पनि धेरै कष्टहरु झेल्नुपर्यो । उसले यो क्षेत्र ऊ क्षेत्र कुनै पनि भनेन, कामहरु गर्दै गयो । पारिजात दिदीले लेख्नुभएको सिटीहलको बूढो ज्यामी जस्तै छ उसको हालत । उसले उसको राज्य त के मजदूर भएर कमाएको शुद्ध ज्यालासम्मन् पाएन । अहिले ऊ ४८ वर्ष भयो अहिलेसम्म उसले २०० जति ठाउँमा थुनुवा भएरै हरेक क्षेत्रमा काम गरिसक्यो । त्यसैले उसलाई लेख्ने विषयको सामग्री खोज्न अरु लेखकलाई जस्तो खोतलखातलको दरोकार भएन । आफ्नै कथाव्यथाहरु यथेष्ट थियो । बेलाबेलामा हिसाब गर्ने काम हुन्थ्यो उसको कि त्यो सबै श्रमको उनीहरुले दिने भनेको अनुसार मात्रै मुल्याङ्कन गर्ने हो भने मेरो मेहनताना खोसेको रकम कमसेकम पनि नेपाली रुपियाँ २ करोड जति हुन्छ ।
किन ऊसँग सबैजना सँगत गर्न डराउँथे त्यो उसलाई थाहा भएन तर जब उसलाई कोही मद्दत गर्न आउँथ्यो त्यो मान्छे गायब हुन्थ्यो । ऊ धेरै चिन्तित हुन्थ्यो । देशमा कागजमा गणतन्त्र आए पनि कुनै एउटा कुनोमा पनि नआएकोमा ऊ सारै दुःखी थियो ।
उसले यत्ति यातना खपेको थियो कि उसलाई कुनै पनि कुरा मनपर्छ भन्नै हुँदैनथ्यो । त्यो खोसेर लगि हाल्थ्यो । उदाहरणका लागि उसले राम्रो अक्षरले नेपाली व्याकरणको पुस्तक जुन दुर्गा भक्त ढकाल भन्ने सरले समिक्षा सहित पढाउनु भएको थियो त्यसलाई उहाँको सुझावसहित पुस्तक निकाल्न उसले पाण्डुलिपि के बनाएको थियो, अमुकहरुले त्यो गायब पारे । त्यस्ता कैयौं पुस्तकाकारका उसका लेखहरु जुन बेला ऊसँग कम्प्युटर उपलब्ध थिएन ती रछानेहरुले कता लगे कता गायब पारे लेखाजोखा थिएन । उसलाई सानोमा हुलाक टिकट सङ्कलन गर्ने सोख थियो तर जब सङ्कलन गर्दा गर्दै एक हजारको हाराहारीको सङ्ख्यामा जब हुलाक टिकटहरु बनाएयो , त्यो पनि कताकता गायब भयो । उसले खेल्ने खेलहरु धेरै थिए जब ऊ अब्बल हुन्थ्यो तब साथीभाइहरु टाढा हुन्थे । खेलको सामाग्रीहरु गायब पारिन्थे । उसलाई धेरै ठुलो आघात हुन्थ्यो । उसले जब क्यारिमबोर्ड, चेस खेल्थ्यो उनीहरुका लागि त्यो आतङ्ककारी खेल हुन्थ्यो । उसका आसेपासेहरुले उसको दिमागमा धेरै फुटबल खेले ।
जब उसले प्रगतिशील भन्ने शब्द फेलापार्यो ऊ धेरै रमायो । प्रगतिशील कविता, प्रगतिशील गीत, प्रगतिशील नाटक, प्रगतिशील कथा, प्रगतिशील उपन्यास, प्रगतिशील व्यक्तित्वहरुका जीवनीमा ऊ निरन्तर लाग्यो । एक किसिमको उर्जा सञ्चारित गर्यो । दविएकाहरुलाई पनि यही प्रगतिशीलका माध्यमबाट निरन्तर उर्जावान बनाइरह्यो । त्यसमा पनि धुम्रपानरहित गर्दा अझ प्रभावकारी हुने उसको अडान हो ।
आन्तोन चेखबको कारिन्दाको मृत्यु कथा पढ्दा ऊ धरै रोएको थियो । रोएको देख्ला भनेर मुख धोएर रोएको थियो । यस्तोमा ऊ अहिले पनि भक्कानिएर उदासिन हुन्छ । रुनु पर्दा ऊ जुन समय पनि ऊ मुख धुन्थ्यो र रुन्थ्यो । ऊ रोएको बेला कत्ति आकाशबाट पानी बर्सेको थियो त्यसको लेखाजोखा थिएन । “धन्यवाद ! छ आकाश तर तिमीले पनि रुनु बाहेक केही गर्न सकेनौ ।” भन्दै रोएका बेला ऊ गुनासो पोख्थ्यो ।
एउटाले भन्यो तँ अन्तरिक्षको मानव । अर्कोले भन्यो तँ कृषको रितिक रोशन जस्तो बुङ्गो । ह्यान्डसम हुनु पनि उसका लागि भुल थियो । ऊजस्ता आदर्शवानका लागि अभिषाप जत्तिक्कै भइदियो । जुनसुकै सहभागीहरुमा महिलाले पुरुषबाट यौन दुव्र्यवहार भोग्छन् तर उसले केटी, महिला, अवलाले, विधवाले शुद्धा उनीहरुसाग लसपस नगर्दा गे, छक्का, छत्तिस जस्ता उपमा पाएको थियो । उसले किताब पढ्न सङ्कलन गर्दा एन्टोन चेखबको बाजी कथाको हिरो रे ऊ । अनि फोहोरी खेल खेलेर बाजी टेलिफिल्मको रबीगिरी हिरो रे । त्यो नाठे कलाकार शुद्धा म विरुद्ध किन उभिनु पर्ने ? अर्कोले भन्यो यो त सधैँ के के के के सधैँ लेखेर बस्छ । यो त जेमा पनि च्याम्पियन पनि छ । यो त नेपाली स्टेफेन हकिन्स रे । हुन पनि ऊसँ यत्ति धेरै योग्यता छ कि कमाण्डो तालिम पाएकाहरु होस् वा गोरिल्ला तालिम पाएकाहरु होस् उसका अगाडि सबै फिक्का हुन्छन् । उसमा यत्ति धेरै प्रतिभा लेखनका लागि सामग्री खोज्दै जाँदै हरेक विषयमा पारङ्गत हुनुसँग सम्बन्धित नै छ ।
उसमा प्रायसः ज्वालामुखी दन्किरहन्थ्यो । त्यसलाई शान्त पार्न उसले लेख्नै पथ्र्यो । यसैबाट उसका भावहरु उसले पोख्थ्यो । लेखन नै उसको सङ्गती थियो । लेखनबाटै ऊ तिर्खा मेटाउँथ्यो । लेखनबाटै उसले आफुलाई हल्का बनाउँथ्यो । शत्रु हाबी छ भने लेखनले नै अस्त्र चलाउँथ्यो । यसरी लेखन उसको सर्वश्व भयो । रचनाहरु उसका सन्तान भए जसलाई उसले अगाढ प्रेम गथ्र्यो । उसमा एक किसिमको ठुलो रोग थियो निको हुनै नसक्ने किसिमको । त्यसलाई उसले लेखनथेरापीले मत्र बिसेक पार्न सक्थ्यो । उसलाई जत्ति थाके पनि निन्द्राले भन्दा लेखनपछि हल्का महसुस हुन्थ्यो । लेखिसकेपछि महाआनन्दितबाट उर्जा पाउँथ्यो ।
सबै सुत्ने समयमा डायरी लेख्ने मनुवा हो ऊ । तर आज कुरो अर्कै छ, मान्छेहरुदेखि आजित भएर आफुलाई गुनासो लेखी शान्त पार्ने ऊ.; उसको लेखन सधैँ समाज सुधर्न नसकेको र आफुले सुधार्न प्रयत्न गरिरहने वचनवद्धता नै हुन्छ । उसले २०६६ सालको बैशख १गते मिर्मिरे विहानीमा ४बजे नै उसले यसरी डायरी लेख्न सुरु गर्यो :—
“एका विहानै भालेले उठाउँछ । विहान भयो अब उठ नयाँ किरण आयो भन्ने चेत दिन्छ । संसारमा जति पनि दविएर रहेका आवाजहरु छन् त्यसलाई आगाको ज्वालामुखीसरि दन्काएर स्वर निकाल्नु आवश्यक छ । यातनाको पञ्जाबाट फुत्किएर आफूले सक्दो दीनदुःखीहरुको सेवामा तल्लिन हुनु आवश्यक छ । जति सुकै तन्द्रा दिए पनि हामीले यसको परवाह नगरी बेजोडका साथ आफ्नो तागतले भ्याएसम्म सर्वहारावर्गको सेवा गर्नुपर्दछ । संसारको छानो सगरमाथा हाम्रै देशमा छ । यसैबाट सबैभन्दा पहिले प्रभात हामीले नै देख्नु छ । विकासको पथमा अविकसित इलाकाहरुलाई डोर्याउनु आवश्यक छ । कसैले पनि बिनामेहनत मोज गर्छ भने त्यो भनेको सामन्ती चरित्र हो ।
म साधारण जीवन जिउन मनपराउँछु । कुनै नराम्रो कुरा देखेपछि चुप लागेर बस्दिन । चुप लागेर बस्नुलाई म सुताइ मान्छु । त्यसैले त्यसलाई सच्याउन सुझाव दिन्छु । आफुले सक्क्दो मेहनत गर्ने कोशिस गर्छु । मानिसहरु आफ्नो मात्र मतलब गर्नुपर्छ भन्छन् । यस्तो कार्य भनेको स्वार्थी कार्य हो । यसले व्यक्तिको मात्र पक्षपोषण त होला तर समाजका लागि योगदान शुन्य हुन्छ । मानिसहरु अरुको मामिलामा पर्नु हुँदैन भनेर पञ्छिन्छन् । मलाई यो पटक्कै मनपर्दैन । यही कारणले अन्याय, जुलुम बढिरहेको हो । मौन आवाजले यहाँ केही हुँदैन । त्यसैले हामीले नकारात्मक पक्ष हटाउन हरदम जुटिरहनु आवश्यक छ । म जुनसुकै कुरा गर्छु त्यो आफुभन्दा तल्ला स्तरकाहरुको स्तरोन्नतिका लागि गर्छु । यसो गर्दा मात्रै मेरो आत्मालाई शान्ति प्राप्त हुन्छ ।
जीवन यसरी वितिरहेछ मानौं आज म सुस्ताइरहेछु । सुस्ताइरहनुको यो पनि एक कारण हो कि यातनामय जीवनको पराकाष्ठा थियो त्यो । घुर्मैलो साँझ थियो त्यो, त्यहिबेला हाम्रो दुई आत्मा एक भएको थियो । हे डायरी ! मैले त्यही बेला तिमीलाई पाएको थिएँ । जीवन फगत बगिरहेको नदीजस्तै बहिरहेछ समय खालोसरि । कसैको पञ्जामा परेसरि भान भइरहेको छ । कडा चियाकफीको तेजिलो स्वाद मनपर्छ, किनकी त्यसमा यातना भुल्ने औषधि छ । जता गएपनि यस भेकका मान्छेहरु अन्याय विरुद्ध आवाज उठाउन डराउँछन् । आवाज उठाएकाहरुलाई साथ दिन त झनै डराउँछन् । एउटा डोरी एकजनाले छिनाउन सकिन्न त्यसका केस्राहरुलाई केलाएर सबैजना मिलेर एकएक गरी छिनाउन सहज हुन्छ । त्यो नै एकताको बल हो । आजलाई यत्ति ल डायरी मित्र । धेरै वर्षपछि मैले विहानीमा पनि राम्रो आत्मीय , असीम, अमीट साथी तिमीलाई भेट्न पाएर म पुलकीत भएको छु । भोलि फेरि मिर्मिरेमै नयाँ उमङ्गका साथ फेरि भेट्ने वाचा भो ।”
धुम्रपानको विरोध र चियासँगको सामिप्यता
एक्लोपन मेटाउन लेखनको सहारा
त्यसपछि भने उसले डायरीमा रम्नु, चियाको चुस्की पिउनु र धुम्रपानको विरोध गर्नु अनि आफुभन्दा तल्लास्तरकाहरसँग आत्मीय हुनु उसको दैनिकी बनाउन थाल्यो । सधैँ ऊ डायरीमा रम्न थाल्यो । उसले चिया खाने लत बनायो , त्यही चिया उसको साथी भयो । चियासँगको उसको सामिप्यता बढ्दै गयो । एउटामा लागेपछि त्यसैमा भाङ्गले लागेजस्तो चियामा ऊ भिज्न थाल्यो । उसलाई त्यो चिया यो चिया होइन जे चिया भए पनि हुने भयो । अनि उसलाई चियाका बारेमा यत्ति विविधता थाहा भयो कि उसले वर्षको ३६५ दिन नै प्रत्येक दिन फरक फरक समयमा फरक चिया खाएरै पनि नदोहोर्याई हरेक चिया खान सक्ने दाबी गर्न थाल्यो । चिया नखाई उसले धरै पाउँर्दैनथ्यो । जब उसले चिया पिउन चियापसलमा बस्थ्यो, चुरोटको धुवाँ फ्याँक्नेको कमी भएन । यस्तोमा उसको पारो तात्थ्यो । ऊ हरेक पसलमा चिया पिउन जान्थ्यो जहाँ पनि चुरोटको धुवाँ फ्याँक्ने बेसोमतीहरु खडा भएर रहन्थ्यो । उसले हातले हम्केर मात्र प्रतिकार गथ्र्यो । उसलाई लाग्यो कि देशको परिवर्तन भन्दा पनि जनताले चैनसँग विना चुरोटको धुँवा एक कप चिया पिउने वातावरण होस् जहाँ चुरोटको धुवाँ चिया पिउनेलाई बमन नगरियोस् । साउन २२ गते उसले धुम्रपान विरुद्धको र्याली आएको देख्यो । ऊ एकदम दङ्ग भयो । त्यो र्याली उसैका लागि आएको जस्तो लाग्यो उसलाई । उसले चियाको चुस्कीसँगै सबैका स्लोगनहरु ठुलो स्वरले हाँसीहाँसी पढ्न थाल्यो । सुरुमा धुम्रपान छोडौँको स्लोगनका साथमा एक बटालियन अगाडि बढे । त्यसपछि “नेपालमा महिलाहरु अत्यधिक धुम्रपान गर्नेमा चौंथो राष्ट्रमा गनिन्छ ।” “एक खिल्ली चुरोटमा करीब ४०० वटा रासायनिक पदार्थ हुन्छन् । जसमध्ये करीब ६० वटाले क्यान्सर गराउन सक्छन् ।“ ”सूर्तिजन्य पदार्थ भत्राले चुरोट , खैनी , पराग , गुट्खा , बिडी , सूर्ति , हुक्का , सिगारलाई जनाउँछ ।” “२०६८ साउन २२ बाट लागूजन्य सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियम ऐन कार्यान्वयन भयो ।” ”भावि सन्ततीलाई स्वस्थ्य बनाउन योगदान गरौं ।“ ”चुरोट सेवन गरेको ७ सेकेण्ड भित्र निकोटीन दिमागमा पुग्छ ।” ”धुम्रपानबाट नेपालमा बर्षेनी १६,००० व्यक्तिहरु मरिरहेका छन् तसर्थ मृत्युलाई कम गर्न सहयोग पु¥याऔं ।” “आफ्नो वालबच्चालाई चुरोटको धुवाँबाट बचाऔं ।” “हरेक सेकेण्डमा एक जना मानिस चुरोटका कारण मरिरहेका छन् ।” ”चुरोट खाने व्यक्ति आफ्नो उमेरभन्दा धरै बूढो देखिन्छन् ।“ “कसैले पनि चुरोट बिडी या सिगार फुटकर रुपमा बेच्न पाइने छैन । “धुवाँरहित वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको हनन नगरौं ।” “म स्वच्छ हावा फेर्न चाहन्छु तपाइँ नि ?” “व्यक्ति , परिवार तथा राष्ट्रलाई कङ्गाल हुनबाट बचाऔं ।” “धुम्रपान गर्न नपाउने सूचना सबैले देख्ने ठाउँमा राख्नु पर्दछ ।” “गर्भवती महिलाले गरेको धुम्रपानले उसको गर्भको बच्चालाई पनि असर गरिरहेको हुन्छ ।” “१८ वर्ष नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न वा निःशूल्क उपलब्ध गराउन पाउने छैन ।” “जनताको स्वस्थ्य हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरौं ।” “कसैले पनि सूर्तिजन्य पदार्थप्रति आकर्षण हुनेगरी बिक्रीस्थल सजावट तथा त्यस्तो पदार्थको प्रदर्शन गर्न पाइने छैन ।” फेरि अन्त्यमा “धुम्रपान छोडौं” स्लोगनका साथमा एक बटालियन अगाडि बढे । अन्त्यमा धुम्रपानले जर्जर बनाएको फोटा, पुतला अदिको र्याली बढ्यो । अन्त्यमा फेरि सबैजना धुम्रपान छोडौँ भनी ठुलो स्वरले कराएर जुलुश अघि बढ्यो । उसको चिया पनि सक्यो ऊ पनि धुम्रपान छोडौँ स्लोगन सहितमा नारालगाउँदै उफ्रीउफ्री अति रमाईरमाई हाँसीहाँसी जुलुशको नेतृत्व गर्न थाल्यो । टाढासम्म पनि उसले नअघाउञ्जेल नारा लगाउँदै त्यो ताँतीमा चियाको कप समाउँदै महाआनन्दित भइरह्यो । उनीहरु सबै उसका सर्वप्रिय साथीहरु भयो ।
चियाको चुस्की उसको सौहार्द्रता भयो । जसलाई पनि ऊ सोध्ने गर्न थाल्यो चिया खानु भो ? उसले उच नीचमा तौलेर उच्च वर्गलाई नफरत गरे पनि । चिया खुवाउँदा भने आनन्दको महसुस गर्यो र सामिप्यता पाएको आभाष गर्यो । चियामा उसले धेरै खर्च गर्यो । समय खर्च गर्यो । चियाको विशेषता हासिल गर्यो । ऊ एकदम चियाको पारखी भयो । वर्षौ चिया पसल थापेको चियावालालाई के थाहा हुन्छ र त्योभन्दा धेरै चियाको बारेमा उसलाई थाहा भयो ।
एक नम्बरमा भयो दूधको चिया । दूधको चिया उसले बाक्लो दूध राखेर स्पेशल त्यसमा ल्वाङ, सुकुमेल, मरिच राखेर बनाएको मन परायो । मोफसलमा चियामा पनि अदुवा राखेको कत्ति मीठो थियो भनी ऊ चिया खाँदा गफिन्थ्यो । “दुनियाँले स्वास्थ्यलाई हानी गर्छ भने पनि जब आत्मा सन्तुष्टि हुन्छ त्यसले शरीरलाई फाइदा गर्छ र त्यो बरु चिया खान नपाउँदा असहमत हुने त्यो झन् चिया नखाँदाभन्दा उसलाई पीर पर्छ ।” उसको भनाइ यस्तै थियो । त्यसैले चिया उसले धेरै मनपरायो । दूध नपाउँदा त फिक्का चिया । फिक्का चियामा पनि कागती हालेर, त्यसमा बीरे नुन हालेर, मरिच पिसेको हालेर कत्ति धेरै मीठो । चियाका बारेमा गफिँदा त्यसमा ऊ, नखाइकन पनि आनन्दिले स्वाद लिइरहन्थ्यो । रक्त चाप अल्पता नहुनेलाई ऊ जस्मिन टि, ग्रिन टी, हरियो टी, काँचो टि, हर्वल चिया खान सल्लाह दिन्थ्यो र यो ग्यास्टिक तथा तौल घटाउन अति उत्तम भन्ने सल्लाह दिन्थ्यो । जाडोमा भोटे चिया, घिऊ चिया, याक चिया खाने, टिमुर चिया, जिम्बु चिया, खास्साको चिया उसको सल्लाह भयो , पीर लागेकालाई कडा चिया खाऊ भन्थ्यो भने यीबाहेक पनि हट लेमन, सख्खर चिया, चिनी कम रङ्ग कडा, चिनी बढी चास्नी चिया । जाँड खाएजस्तो खाने चिया । विहानको सुरुमा खाने चिया, विद्यार्थीले जाँचमा खाने चिया, दिउँसो साथीभाइसँग खाने चिया, रेष्टुरेण्टको टेबुलमा खाने चिया, चिनी नघोलिकन दिने चिया, चियामा पिक्चर, देखिने चिया, रमरम उत्तेजना बढाउने यार्सा चिया आदिआदि । के के हो चियामा पिएचडि गरेको पनि भनी हौसिन थाल्यो ।
चिया खाने तरिका पनि कुनै अभिवादन चिया , कुनै घुस खोरी चिया, कुनै विहे चिया, कुनै बेरोजगार चिया, लभ चिया, ब्रेकअफचिया, गेट टुगेदर चिया, ओपनिङ्ग चिया, कुनै प्लास्टिक कप चिया, कुनै गिलास चिया, कुनै आधि चिया, कुनै अभिनयका लागि खाली कप चिया, कुनै फिजवाला चिया, कुनै बुलेट चिया, कुनै सिसाको गिलास चिया, कुनै ढक्कन चिया, कुनै केटली अगाडि राखेर खाने चिया, कुनै दाहिने हातले खाने चिया, कुनै देब्रे हाते चिया, कुनै हाण्डिल भएर पनि हाण्डिल नसमाई खाने चिया, कुनै दुबै हातले खाने चिया । कुनै चिसो पारी खाने चिया, कुनै तात्तातै जत्ति तातो भए पनि चिसो भनी मुखबाट वाफ निकाली फुर्तिसाथ खाने चिया, हण्डिललाई हरेक कोणबाट देखाई खाने चिया । हरेकको आ–आफ्नै मुल्य मान्यताको चिया । तर जस्तै भए पनि उसको सोच चिया खाइदिए परम आनन्दित हुने मान्छे ऊ । तर चियामा चुरोट मिसाएको पटक्कै नसहने धुम्रपानको कट्टर विरोधी, समाजका लागि योगदान यसैबाट हुन्छ भन्ने चियाको तीख्खर पारखी मनुवा भयो ऊ । जसलाई पनि चिया पिउनु भो ? भनी जत्तिबेला पनि सोध्ने ऊ र आफुलाई पनि जत्ति बेला पनि चिया खानु भो भनेपछि खुसी हुने प्राणी भयो ऊ ।
“आखिर चिया नेपालको मौलिक अतिथि सत्कार गर्ने राम्रो माध्यम हो । विदेशमा चिया हामी कहाँ बाटै गएको हो । चियाको गढ इलाम, झापा हाम्रै हो । दार्जिलिङ, सिक्किम पनि त हाम्रै हो नि । त्यसैले पार्टी पिच्छे चिया फरक, खाने तरिका फरक भए पनि चियामा खास्साको खास नेपालीपन छ । यो विश्वको सबलाई महसुस गराउनु पर्छ ।” यसरी चियाको गुणगान, महात्म्य, खुलस्त विचारमा ऊ सधैँ रमाउँन थाल्यो । हरदम ताजगी बनायो । कहिल्यै थाकेन । उत्साहित भइरह्यो । लेखेर उ ताजगी , झन् चियाको साथ पाएपछि त्योभन्दा बढी ताजगी ।
ऊ हरेक विहान भालेको डाकसँगै चियाको चुस्कीसँग रम्दै कलमको बहार छर्दथ्यो उसका डायरीका सुगन्धित देशप्रेमले ओतप्रोत माटोमा । त्यहाँ पनि उसले धुवाँको सामना गर्नुपथ्र्यो । उसले त्यो विहानीको लेखनको स्थान अब भने विद्यालयको प्राङ्गणलाई रोज्न थाल्यो । बल्ल त्यहाँ उसले धुवाँको सामना गर्नुपरेन । स्वयम्भूनिरको विद्यालयको प्राङ्गण उसले लेखनका लागि रोजेको थियो । विहान विहान सबेरै बुद्धलाई नियाल्थ्यो अनि विद्यालय प्राङ्गणमा जान्थ्यो । बुद्धप्रति असीम श्रद्धा प्रकट गर्दै डायरी सुरु गथ्र्यो ।
आज २० मार्च २०१९को कथावाचन दिवसको शुभकामनासहित
विजु सुवेदी “विजय”
maya tamang (not verified) — Thu, 04/04/2019 - 00:34
यिनीभन्दा राम्रा अरु हुनै सक्दैनन ।